ဆောင်းပါး • VECTOR
LeaveaComment	/ ဆောင်းပါး / By Than Htun Oo
ယခုလို ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါကြောင့် ဘယ်မှ မသွားရမလာရနဲ့ အိမ်တွင်းအောင်းနေကြရချိန်မှာ ၂၀၁၉ တုန်းက ဆရာညို(ခင်မောင်ညို- ဘောဂဗေဒ)နဲ့အတူ နယ်အနှံ့ခြေဆန့်ခဲ့ရတာလေးတွေကို သတိရနေမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက“၂၆ ရက်နေ့ရောက်ပြီး ကျောင်းတွေလှည့်မယ်။တစ်ပတ်ခန့်” ဆိုတဲ့ Facebook Messenger မှ စာတိုလေးကိုဖတ်ပြီး အံ့သြသွားမိတယ်။ထို Message ကို ဆရာညို (ဦးခင်မောင်ညို-ဘောဂဗေဒ)မှ လှမ်းပို့ လိုက် တာဖြစ်သည်။ဆရာ့လို အိမ်မကပ်နိုင်အောင် အလုပ်တွေရှုပ် ခရီးတွေထွက်နေသူတစ်ယောက်က အခုလို တစ်ပတ်ခန့် အချိန်ယူပြီး ကျောင်းတွေကို လှည့်ဟောပြောမယ် ဆိုတော့ အံ့သြစရာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ဆရာလာမည့်ထိုရက်များသည် “ဝန်ကြီးခရီးစဉ်” အစစ်ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ ဆရာ့ကို လေဆိပ်သွားကြိုဖို့ ကားလဲမရှိ။ ဆရာရောက်ပြီဆိုရင် နားနားနေနေနဲ့ စိတ်အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ ခေတ်မှီတိုက်ခန်းကောင်းကောင်းလဲမရှိ။ဒီကြားထဲ ကိုယ်က စည်ပင်ကော်မတီဥက္ကဌကလဲဖြစ်နေသဖြင့် ဌာနရဲ့တာဝန်ကလည်းတစ်ဖက်က ရှိနေတော့ …
မျှဝေခြင်း အစီအစဉ်မှ အသွင်ပြောင်းကျောက်ကလေးများ Read More »
ကဆုန်လပြည့်နေ့ဆိုတာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ သေချာသွားတဲ့နေ့ ၊ဘုရားအလောင်းတော် ဖွားမြင်တဲ့နေ့ ၊ ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ ၊ ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူတဲ့ နေ့ ရယ်လို့ ထူးခြားချက် ၄-ရပ်နဲ့ ပြည့်စုံနေပါတယ်။အခုရောက်ရှိနေတဲ့ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာဆိုရင်တော့ တနင်္လာဆိုတဲ့ လမင်းကြီးဟာ နေ့ပိုင်း၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်အထိ တူရာသီရှိ အင်္ဂါပိုင်စိတြနက္ခတ်နယ်ပယ်ကို ဖြတ်သန်း နေတာဖြစ်ပြီး အင်္ဂါဂြိုလ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကုမ်ရာသီမှာ သူပိုင် ဓနသိဒ္ဓ နက္ခတ်ကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့် မနက်ခင်းပိုင်းကနေနေ့လည် ၂ နာရီကျော်တဲ့ အထိကာလတွေမှာ ထက်မြက်တက်ကြွတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေမယ်။ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ နဲနဲခဲယဉ်းနေတတ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဖက်စိတ်၊ဒေါသစိတ်တွေ ၊ သောကစိတ်တွေများနေတတ်ပါတယ်။ နေ့လည် ၂ နာရီ ၄၅ -မိနစ်ကျော် နောက်ပိုင်းကျပြန်တော့လည်း ရာဟုပိုင် သွားတိနက္ခတ် ရဲ့ နယ်ပယ်ထဲကို ဖြတ်သန်းမှာဖြစ်ပြီး ရာဟု က မေထုန်ရာသီရှိ သူပိုင် အဒြနက္ခတ်ရဲ့နယ်ပယ်ကိုဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် …
ကိုဗစ်နဲ့ကြုံ လကဆုန် Read More »
ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် The Economist မဂ္ဂဇင်းကြီးက ကိုဗစ်-၁၉ ပြန့်နှံ့မှုသက်သာအောင် အများပြည်သူတွေ မျက်နှာဖုံးတပ်သင့်သလား? ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးကို‌‌ေမးခွန်းနဲ့စ‌ေရးထားတယ် ပြီးတော့တပ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတပ်စရာမရှိအောင်မလုပ်နဲ့လို့ ခေါင်းစဉ်ခွဲနဲ့ ပြန်ဖြေထားပါတယ်။ စောစောပိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က မလိုဘူးတဲ့။ ဗြိတိသျှအစိုးရကလည်း မတပ်နဲ့တဲ့။ အမေရိကန်ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး ဗဟိုဌာနကကျတော့ စောစောပိုင်းမှာ မတပ်နဲ့တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဧပြီလဆန်းရောက်တော့ တပ်ပါလို့ဖြစ်သွားတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်၊ အာရှဒေသမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာဘာမျှမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှ မျက်နှာဖုံးတပ်တာကို ကျန်းမာရေးဌာနတွေက အားပေးတယ်။ ပြည်သူတွေက လိုက်နာတယ်။ ဒီတော့ အများပြည်သူတွေ တပ်သင့်သလား? မတပ်သင့်ဘူးလား?ကိုဗစ်ဘယ်လိုကူးစက်သလဲဆိုတာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်နေကြဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ တံတွေးထွေးတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့အမှုန့်တွေ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းက ထွက်လာတဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကနေ အခြားလူတွေကို ကူးစက်စေတယ်ဆိုတာ သိလာကြပြီ။ သာမန်အသက်ရှူတဲ့အခါမျိုး ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ …
မျက်နှာဖုံးတပ်သင့်မတပ်သင့် Read More »
ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ဘာသာပြန်ဆိုသည် (5 ways to overcome the Psychological Stress of Coronavirus) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာမရေရာဘူး။ အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် လူသားတိုင်းဂရုစိုက်သင့်တယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဘာတွေများကောင်းရာကောင်းကြောင်းဖြစ်လာမလဲဆိုတာ တွေးလို့တောင်မရဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဟာ သူတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ ထူးဆန်းတဲ့နည်းနဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ကြောင်းတွေပြန်လှည့်ကြည့်ရအောင်။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်တုန်းက ဟင်ဒန်ဘာ့ဂ်လေသင်္ဘောပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သွားတာဟာ လေကြောင်းပျံသန်းမှုသမိုင်းကို အကောင်းဘက်လှည့်ပေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်က ချာနိုဘိုင်းလ်အနုမြူစက်ရုံပေါက်ကွဲမှုဟာ စွမ်းအင်လောကမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုဟာ ထိခိုက်မှုကြီးမားပေမယ့် လေကြောင်းသွားလာရေး ပိုပြီးအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဖြင့်ရင် အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ဒီရောဂါပိုးကနေ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ? ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဆိုးမြင်သတင်းတွေကို လူတစ်ယောက်စီအတွက် …
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စိတ်မဆင်းရဲပါနဲ့ Read More »
( Yaval Noah Harari )ရေး၍ ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
ယခုအခါ လူသားတို့သည် ကမ္ဘာ့အကျပ်အတည်းတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၊ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို ကပိလဝတ်နေပြည် သို့ ပြန်လည်ကြွမြန်းရန်အတွက် ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးက အမတ်ဆယ်ဦးကို နောက်ပါ အခြံအရံတစ်ထောင်စီဖြင့်ဦးဆောင်စေ လျက်ဘုရားပင့်ရန် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်သို့ ဆယ်ကြိမ်ခွဲကာ အဖွဲ့လိုက်သွားရောက်၍ ပင့်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဖွဲရဲ့ ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ကာဠူဒါယီ အမတ်ကြီးကိုယ်တိုင် ဘုရားရှင်၏တရားတော်မြတ်ကို နာကြားရပြီး ရဟန္တာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း ကာဠူဒါယီ အမတ်ကြီးအနေနဲ့ လာရင်းကိစ္စကို ဦးတည်ချက်မပျောက်ပဲ လျှောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခမည်းတော်မင်းကြီး၏ ကျေးဇူးကို သိသော အားဖြင့် ကပိလဝတ်နေပြည် စံဋ္ဌာနီသို့ ပြန်လည်ကြွမြန်းရန် အခါသင့်ကြောင်းကို ဆောင်းအကုန် နွေအကူး တပေါင်းလ၏ ထူးကဲသော သာယာလှပပုံ၊ရွက်ဟောင်းကျကြွေ ၊ ရွက်သစ်ဝေပြီး ၊ နီတွေးသောရွက်နု ၊ အဖူးအပွင့်တို့ ပြည့်စုံနေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်းများနှင့် မပူလွန်းမချမ်းလွန်း ရာသီဥတု မျှတ နေသော …
တပေါင်းလပြည့် “ မြတ်ဗုဒ္ဓ ပြည်တော်ဝင်နေ့” Read More »
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကို နွဲပျော်နေကြတဲ့ အချိန်ခါသမယလေးမှာ Vector Online Learning Platform အနေနဲ့လဲ ပါဝင်ဆင်နွဲရင်း သိသလောက်လေးတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။တန်ဆောင်မုန်းလနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေးစာဆို စလေဦးပုည က”မိုးဝဿန်ချိန်ဆုံးလို့ တန်ဆောင်မုန်းဗြိစ္ဆာ၊ ဖဝါးနှစ်စွန်း ခါဝယ်၊ ကြတ္တိကာကြယ်မင်း၊ ခဝဲပွင့်မာလာငယ်၊ သည်ချိန်ခါမွှေးထုံ ပျံ့သင်း”ဟု ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တန်ဆောင်မုန်းလမှာတနင်္ဂနွေဂြိုလ် နေမင်းဟာ ဗြိစ ္ဆာရာသီကို ရောက်ရှိပြီး လမင်းကြီးကတော့ ကြတ္တိကာနက္ခတ်နဲ့ အတူယှဉ်နေမယ် ၊ ပြီးတော့ ခဝဲပန်းရနံ့လေးတွေနဲ့လဲ မွှေးထုံသင်းပျံ့ နေမှာ ဖြစ်ကြောင်းဖွဲ့ဆိုထားတာ ပါ။ဒါက နှစ်စဉ်ကြုံနေကျ သဘာဝဖြစ်စဉ်တွေလို့ ဆိုရမှာပါ။နောက်တစ်ခုက တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညကို ဆေးပေါင်းခတဲ့ညလို့ ပြောကြသလို သူခိုးည လို့လဲ ပြောကြပါသေးတယ်။ဒါကလဲ တနင်္လာဆိုတဲ့ လမင်းကြီးက ကြတ္တိကာနက္ခတ်မှာ ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အကျိုးအာနိသင်ကို ရည်ညွှန်းပြီးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြတ္တိကာနက္ခတ်ရဲ့ သခင်ဂြိုလ်ဟာ နေမင်းဖြစ်သလိုသူ့ကို(The Star …
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် Read More »
စေတနာကို “ကံ”လို့ခေါ် ကြောင်း တော်တော်များများသိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။စေတနာဆိုရာမှာလဲ ကုသိုလ်နဲ့ယှဉ်တဲ့စေတနာ၊အကုသိုလ်နဲ့ယှဉ်တဲ့စေတနာရယ်လို့ ကွဲပြားပြန်တယ်။အဲဒီလို စေတနာတွေ စိတ်ထဲမှာဖြစ်ယုံနဲ့ ပဲ မနောကံ ရယ်လို့ ဖြစ်သွားပြီး မိမိရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိန်းဝပ် သွားတာပါ။ အပင်ပေါက်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိတွေကိန်းနေတဲ့မျိုးစေ့လေး လိုဖြစ်သွားတယ်။ဒီကံတွေရဲ့ အကျိုးပေး ပုံကိုပြောရရင် စိတ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်း ဇော(၇)ကြိမ် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီလို ဇော(၇)ကြိမ်ထဲကမှ ပထမဇော က အခုဘဝမှာ (၇)ရက်၊(၇)လ (၇)နှစ် အတွင်းအကျိုးပေးပါတယ်။သတ္တမမြောက်ဇော ကတော့ ဒုတိယ ဘ၀ ကစပြီး အကျိုးပေးပါတယ်။အလယ်ဇော (၅)ချက်ကတော့ တတိယဘ၀ ကစပြီး ဘုရားရဟန္တာဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးဘဝအထိ အကျိုးပေးဖို့ အရိပ်ပမာ လိုက်နေမှာပါ။ဒါကြောင့် ကိုယ့်စိတ် ကလေးမှာ အမှတ်တမဲ့နဲ့ ထင်ဟပ်လာမယ့် အာရုံတွေ ၊အတွေးတွေကို အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ လူတစ်ယောက် သေဆုံးခါနီးမှာ ကမ္မနိမိတ် ဂတိနိမိတ်တွေ ပေါ်ပြီး …
“ပစ္စုပ္ပန်ထဲသို့ ရောက်လာနိုင်သောအိပ်မက်များ” Read More »